Forex Trading ၏အကျိုးကျေးဇူးများ | FXCC နှင့်အတူ ECN Forex Trading ၏ကောင်းကျိုးများ
iOS ကိုထရေးဒင်း app ကို
အန်းဒရွိုက်ထရေးဒင်း app ကို
FXCC STP / ECN ပွဲစား
24 /5အတွက်အထောက်အပံ့
XL ECN အကောင့်
Forex Tools များ
Forex တိုက်ရိုက် Quotes
PC အတွက် MT4
MT4 Multi Terminal နှင့်
multi အကောင့် Manager ကို
iPhone အတွက် MT4 (iOS ကို)
Android အတွက် MT4
iPad အတွက် MT4 (iOS ကို)
ပညာရေး & သုတေသန
Desk ဖြေရှင်း vs. ECN
အခြေခံပညာ Pairs ထရေးဒင်း
Forex ပညာရေးဆိုင်ရာ eBook
နံနက် Roll Call တို့အားသုံးသပ်ခြင်း
တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် Forex Trading ကိုလေ့လာပါ
အဘယ်အရာကို Forex Trading အတွက်ပြန့်နှံ့?
Forex အတွက် Pip ကဘာလဲ?
ECN XL + အကောင့်
ECN XL (သုညအကောင့်)
ပင်မစာမျက်နှာ / အကြောင်းအရာ / အဘယ်ကြောင့် FXCC
နိုင်ငံ အာဖဂန်နစ္စတန် အယ်လ်ဘေးနီးယား အယ်လ်ဂျီးရီးယား အမေရိကန်ဆာမိုအာ အင်ဒိုရာ အင်ဂိုလာနိုင်ငံ အန်ဂွီလား ဂွါနှင့်ဘာဘူဒါ အာဂျင်တီးနား အာမေးနီးယား ယူးဘား ၾသစေတးလ် သြစတြီးယား အဇာဘိုင်ဂျန် ဘဟားမား ဘာရိန်း ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံ ဘာဘေးဒိုးစ ဘယ်လာရုစ် belize ဘီနင် ဘာမြူဒါ ဘူတန် ဘိုလီးဗီးယား၏ Plurinational ပြည်နယ် ဘော့စနီးယားနှင့်ဟာဇီဂိုဗီးနား ဘော့ဆွာနာ ဘရာဇီး ဗြိတိန်နိုင်ငံကအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနယ်မြေတွေကို ဘရူနိုင်း ဘူလ်ဂေးရီးယား Burkina Faso ဘူရွန်ဒီ ကမ္ဘောဒီးယား ကင်မရွန်း ကေနဒါ ကိပ်ဗာဒီ ကေမန်ကျွန်းစု ဗဟိုအာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံ ချဒ် ချီလီ တရုတ်နိုင်ငံ ကိုးကိုစ် (ကီးလင်) ကျွန်းများ ကိုလံဘီယာ ကော်မ္မရိုဇ့် ကွန်ဂို ကွန်ဂိုခြင်း, ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ ကွတ်ကျွန်းစု ကော့စတာရီကာ အိုင်ဗရီကို့စ် Cote d'Ivoire ခရိုအေးရှား ကျူးဘား ဆိုက်ပရပ်စ် ချက်သမ္မတနိုင်ငံ ဒိန္းမတ္ ဂျီဘူတီနိုင်ငံ ဒိုမီနီ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ အီကွေဒေါနိုင်ငံ အဲဂုတ္တုပြည်၌ အယ်လ်ဆာဗေးဒေါ အီကွေတာဂီနီနိုင်ငံ အီရီထရီးယား အက်စ်တိုးနီးယား အီသီယိုးပီး ဖောက်ကလန်ကျွန်းစု (မာလ်ဗီး) ဖရိုးကျွန်းစု ဖီဂျီ ဖင်လန် ပြင်သစ် ပြင်သစ်ဂီယာနာ ပြင်သစ်ပိုလီနီးရှား ပြင်သစ်တောင်ပိုင်းနယ်မြေ gabon ဂမ်ဘီယာ Georgia ဂျာမနီ ဂါနာ ဂျီဘရောလ် ဂရိနိုင်ငံ ဂရင်းလန်း နေးဒါ Guadeloupe ဂူအမ်ကျွန်း ဂွာတီမာလာ ဂါဇီး ဂီနီနိုင်ငံ ဂီနီဘစ် ဂိုင်ယာနာ ဟေတီ သန့်ရှင်းသောဘုရား See (ဗာတီကန်စီးတီးပြည်နယ်) ဟွန်ဒူးရပ်စ် ဟောင်ကောင် ဟန်ဂေရီ အိုက်စလန် အိႏၵိယ အင်ဒိုနီးရှား အီရန်၏အစ္စလာမ့်သမ္မတနိုင်ငံ အီရတ် အိုင်ယာလန် လူသား၏ကျွန်း ဣသရလေ အီတလီ ဂျမေကာ ဂျပန် ဂျာစီ ယော်ဒန်မြစ် ကာဇက်စတန် ကင်ညာ ကီရီဘာတီ ကိုရီးယား, ဒီမိုကရက်တစ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ကိုရီးယား, သမ္မတနိုင်ငံ ကူဝိတ် ကာဂျစ္စတန် လာအိုပြည်သူ့ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ လတ်ဗီးယား လေဗနုန်တော လီဆိုသို လိုက်ဘေးရီးယားနိုင်ငံ လစ်ဗျားအာရပ် Jamahiriya လီချင်စတိန်း လစ်သူ လူဇင်ဘတ် မကာအို မက်ဆီဒိုးနီးယား၏ယခင်ယူဂိုဆလပ်သမ္မတနိုင်ငံ ဒါဂတ်စကာ မာလာဝီ မေလးရွား မော်လ်ဒိုက် မာလီ မော်လ်တာ မာရှယ်ကျွန်းစု မာတီနစ် Mauritania မောရစ်ရှ မာယော့တ် မက္ကစီကို Micronesia ၏ပဒေသရာဇ်စတိတ် မော်လ်ဒိုဗာ, သမ္မတနိုင်ငံ မိုနာကို မွန်ဂိုလီးယား မွန်တီနီဂရိုး မွန်ဆာရတ် မော်ရိုကို မိုဇမ်ဘစ် ျမန္မာႏုိင္ငံ နမီးဘီးယား Nauru နီပေါ နယ်သာလန် နယ်သာလန်အန်တီ နယူးကယ်လီဒိုးနီးယား နယူးဇီလန် နီကာရာဂွာ နိုင်ဂျာ နိုင်ဂျီးရီးယား နီယူး Norfolk ကျွန်း မြောက်ပိုင်းမာရီယာနာကျွန်းများ ေနာ္ေဝး အိုမန် ပါကစ္စတန် ပလောင်း ပါလက်စတိုင်းနယ်မြေတွေကို, သိမ်းပိုက် ပနားမား ပါပူဝါနယူးဂီနီနိုင်ငံ ပါရာဂွေး ပီရူး ဖိလစ္ပုိင္ Pitcairn- ပိုလန် ပေါ်တူဂီ Puerto Rico ကာတာနိုင်ငံ ပြန်လည်ဆုံဆည်းRéunion ရိုမေးနီးယား ရုရှားပြည်ထောင်စု ရဝမ်ဒါ စိန့်ဘာသယ်လဲမီ စိန့်ဟယ်လီနာ, တက်မြန်းသည့်နေ့များနှင့်ထရစ်စ da Cunha စိန့်ကစ်နှင့်ဗစ် စိန့်လူစီယာ စိန့်မာတင် (ပြင်သစ်အစိတ်အပိုင်း) စိန့်ပီယားနှင့်မီကွီလွန် စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဂရီနီဒိုင်း ဆာမိုအာ ဆန်မာရီနို စဝ်တုန်နှင့်ပရ ဆော်ဒီအာရေဗျ senegal ဆားဘီးယား seychelles ဆီယာရာလီယွန် စင္ကာပူႏုိင္ငံ ဆလိုဗက်ကီး ဆလိုဗေးနီး ဆော်လမွန်ကျွန်းစု ဆိုမာလီယာ တောင်အာဖရိက တောင်ဂျော်ဂျီယာနှင့်တောင် Sandwich ကကျွန်းစု စပိန် သီရိလင်္ကာနိုင်ငံ ဆူဒန် ဆူရာနမ် Svalbard နှင့်ဇန်နဝါရီ Mayen ဆွာဇီလန် ဆြီဒင္ႏုိင္ငံ ဆွစ်ဇလန် ဆီးရီးယားအာရပ်သမ္မတနိုင်ငံ ထိုင်ဝမ်တရုတ်ပြည်နယ်ရှိ Tajikistan တန်ဇန်းနီးယား၏ယူနိုက်တက်သမ္မတနိုင်ငံ ထုိင္းႏုိင္ငံ အရှေ့တီမော တိုဂို အဘိဓါန် Tokelau Tonga ထရီနီဒက်နှင့်တိုဘာဂို တူနီးရှား ကြက်ဆင် တာ့ခ်မင်နစ္စတန် တူရကီနှင့်စိုးကော့စ်ကျွန်းများ Tuvalu ယူဂန်ဒါနိုင်ငံ ယူကရိန်း အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း ဥရုဂွေး ဥဇဘက် ဗာနူအာ ဗင်နီဇွဲလား၏ Bolivarian သမ္မတနိုင်ငံ ဗီယက်နမ် Virgin Islands, ဗြိတိန် Virgin Islands, အမေရိကန် Wallis နှင့် Futuna- အနောက်တိုင်းဆာဟာရ ယီမင် ဇမ်ဘီယာ ဇင်ဘာဘွေ
ဖွင့် DEMO ACCOUNT ကို
အဘယ်ကြောင့် FXCC? ဤတွင်အဘယ်ကြောင့်ဖွင့် ..
သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းချင်တော်မူသောငါတို့၏စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်ပွဲစားအများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကြွင်းသောအရာထဲကနေ FXCC ခွဲခြားသောအရာကိုအဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည်ကိုယ်ကိုကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့စဉ်းစားပါသလဲ? သင်တို့သည်အဘယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘဲအချို့သောအခြားအကျိုးဆောင်နှင့်နေသည်ထက်, ငါတို့အားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုသင့်သလဲ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်တို့အထူးစေသည်?
သငျသညျအကြှနျုပျတို့ FXCC မှာစကားရပ်ရှိသည်, ယင်း FXCC ခြားနားချက်ကိုတွေ့ကြုံခံစားဖို့မြင့်မားပိုက်ကွန်ကိုတန်ဖိုးရှိတစ်ဦးချင်းစီဖြစ်ရန်မလိုပါ, "ကွီးသပိတ်ပင်သစ်ပင်များသေးငယ်တဲ့ acorn ကနေကြီးထွား" ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကတည်းကအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူကုန်သွယ်ကြသူအများအပြား clients များ, မျက်မြင်သောကြောင့်, ခြွင်းချက်ကုန်သည်များဖြစ်လာဖို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူကြီးထွားကကိုအသုံးပြုပါ။
ဒါကြောင့်ငါတို့သည်သင်တို့သည်လက်ရှိတွင်ပေါ်များမှာသမျှတိုးတက်မှုသံသရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု, သင့်ရည်မှန်းချက်ဖြင့်သင်တို့ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ဝမ်းသာဖြစ်လိမ့်မည်။ ကုန်သွယ်ဖို့နယူး? ကြိုဆိုပါသည်, စတင်ရန်ကြကုန်အံ့။ တစ်ဦးကဝါရင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်? ကျနော်တို့သင်, ခြားနားချက်တစ်ခုအစစ်အမှန်အချက်သည်သင်သရုပ်ပြအတွက်တစ်ခုခုရထင်ပါတယ်။
ကျနော်တို့ကိုလည်း "သင်၏ဘက်မှာပွဲစား" ဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်ပုဒ်နောက်ကွယ်မှရပ်တယ်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့သညျ "သင့်ရဲ့ဘက်မှာ" ရှိပါသလဲ ကောင်းပြီပထမ, ငါတို့သည်သင်တို့အောင်မြင်သောဖြစ်ချင်တယ်ကျနော်တို့အောင်မြင်မှုရရန်နှင့်ကုန်သည်အဖြစ်သင့်ကျွမ်းကျင်မှုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့သငျသညျလိုအပ်ပါတယ်။ သင်ကစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒါဟာအတော်လေးယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်သော, အသိပညာ, လိမ္မာသောကုန်သည်များပျော်ရွှင်ကုန်သည်များဖြစ်ကြသည်။ သင်အောင်မြင်လျှင်သင်သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူကုန်သွယ်မှုနဲ့ကျနော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းဖို့ရှိသည်အပေါငျးတို့သဝန်ဆောင်မှုများကိုခံစားရန်ဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ကအစပိုင်းမှာမယ့်ရိုးရှင်းတဲ့, ရိုးရှင်းတဲ့ Forex ပွဲစားအဖြစ်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်စတင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားသမိုင်းမှတ်တိုင်များအများအပြားရောက်ရှိသကဲ့သို့, ငါတို့ပိုကောင်းဖြစ်ခြင်းအားဖြင့်ကြီးမားလေပြီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်နည်းပညာကိုတစ်ဦးလျှင်မြန်အရှိန်အဟုန်မှာရှေ့ဆက်ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်နှင့်အမျှကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းများဖြတ်တောက်ခြင်းအစွန်းမှာညာဘက်ကျန်ရစ်ခဲ့ကြစေရန်, အပေါငျးတို့သနည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေ၏စိတ်နှလုံးမှာနှုတ်ဆက်ပြီးနှင့်ကြပြီ။ ယခုကြှနျုပျတို့နေဆဲကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး၏ရှေ့တန်းမှမှာဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုချပြီးနေတုန်း, ကုန်သွယ်ရေး၏ဖြစ်စဉ်ကို simplifying ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကိုအပေါ်အခြေခံပြီး, အကောင်းဆုံးဂုဏ်သတင်းကိုတီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့အစွမ်းကုန်လေးစားမှုနှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားအတူတစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်လူတိုင်းဆက်ဆံပါ။
အကြှနျုပျတို့သညျသငျ၌ကုန်သွယ်မှုများအတွက်တစ်ဦးလုံးဝပွင့်လင်းကုန်သွယ်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်အခမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပေးခွငျးအားဖွငျ့အောင်မြင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါသည်; သင့်ရဲ့အမိန့်ဖြောင့်ဈေးကွက်ကိုသွားနှင့်လိုက်ဖက်နေကြတယ်, အဘယ်သူမျှမဖောက်စားပွဲပေါ်မှာ်ရောက်စွက်ဖက်လည်းမရှိ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ECN / STP မော်ဒယ်အသုံးချဖို့သင်ကဲ့သို့လျင်မြန်စွာလက်ရှိနည်းပညာခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်အဖြစ်စျေးကွက်ကိုရယူသုံးနေကြသေချာ။ သင်ကအကောင်းဆုံးကိုးကားရတတ်နိုင်သမျှတရားမျှတပြီးပွင့်လင်းနည်းလမ်းအတွက်စျေးကွက်ကယ်မနှုတ်နိုင်ဖြည်ပါလိမ့်မယ်။
ငါတို့သည်လည်းသင်ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားသုတေသနပစ္စည်းထောက်ပံ့ခြင်းဖြင့်ကုန်သည်များအဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ မပုံမှန်ထက်ထုပ်ပိုးဆောင်းပါးများနှင့်သင်သည်အခြားပွဲစားများကပေးပို့တဲ့မြင်ရပါလိမ့်မည်သည့်မကြာခဏအတွေးနောက်မှာအဖြစ်ကိုအပ်နံပါတ်များရှုပ်ထွေးခင်းကျင်း။ , ဒါပေမယ့်ဂရုတစိုက်သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချကူညီကူညီရန်, သက်ဆိုင်ရာများနှင့်အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား။
ကျနော်တို့အနေနဲ့ကွပ်မျက်သာဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ကြသည်။ ECN Forex ပွဲစားများငွေပေးငွေယူနှုန်းသေးငယ်တဲ့အဖိုးအခမှအကျိုး။ အဆိုပါမြင့်ကုန်သွယ်ရေး volumes ကိုအဆိုပါပွဲစား '' clients များ, အမြင့်ပွဲစားရဲ့အမြတ်အစွန်း generate ။ သင့်ရဲ့စျေးကွက်နိုင်ရန်နှင့်တတ်နိုင်သလောက်မြန်မြန်ဖြည့်အမိန့်ရယူခြင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နှင့်မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်အဲဒီမှာသင်ရှိသည် ဖြစ်. , ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များပေးသည့်တစ်ဦးချင်းစီဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းစုံစုံနှင့်တိကျသော: ကျွန်တော်တို့ကိုကဲ့သို့ဖြစ်၏ရာမိတ်ဆက်စကားအကြောင်းကိုတစ်ဦး။ ကျွန်တော်တို့ကိုငါတို့သည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ကြောင်းထင်ဘာလို့သရုပ်ပြဖို့အခွင့်အလမ်းခှငျ့မအဘယ်ကြောင့်သင်, ကြွင်းသောအရာအချို့ကိုကြိုးစားခဲ့ကြပါမည်နည်း
FX ဗဟိုရှင်းလင်း, Ltd (www.fxcc.com/eu) CIF လိုင်စင်နံပါတ် 121 / 10 အတူဆိုက်ပရပ်စ် Securities and Exchange Commission (CySEC) ကစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
Central Clearing Ltd (www.fxcc.com & www.fxcc.net) သည်ဗင်နူအာသမ္မတနိုင်ငံအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီအက်ဥပဒေ [CAP 222] တွင်မှတ်ပုံတင်နံပါတ် 14576 ဖြင့်မှတ်ပုံတင်ထားသည်။
အန္တရာယ်သတိပေးချက်: သြဇာထုတ်ကုန်ဖြစ်သော Forex အတွက်ထရေးဒင်းနှင့် Difference များအတွက်စာချုပ်များ (CFDs), အလွန်မှန်းဆသည်နှင့်ဆုံးရှုံးမှုအများအပြားအန္တရာယ်ပါဝငျသညျ။ ဒါဟာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရှိသမျှကိုကနဦးအရင်းအနှီးဆုံးရှုံးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကွောငျ့, Forex နဲ့ CFDs အားလုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်သင့်တော်မဖွစျနိုငျသညျ။ သငျသညျဆုံးရှုံးဖို့တတ်နိုင်ငွေနှင့်သာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်။ ဒါကြောင့်သင်အပြည့်အဝနားလည်သဘောပေါက်ကြောင်းသေချာစေရန် ကျေးဇူးပြု. ပါဝင်ပတ်သက်အန္တရာယ်များ။ လိုအပ်ခဲ့လျှင်လွတ်လပ်သောအကြံဉာဏ်ကိုရှာကြလော့။
FXCC အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနေထိုင်သူများနှင့် / သို့မဟုတ်နိုင်ငံသားများအဘို့န်ဆောင်မှုပေးမထားဘူး။
2020 FXCC ©မူပိုင်။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။